သွေးတိုးနှင့်နှလုံးရောဂါ Archives - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
နှလုံးစည်းချက်မူမမှန်တဲ့ဝေဒနာကတော့ နှလုံးအဆို့ရှင်ရောဂါ နှလုံးအားနည်းခြင်းနဲ့ တခြားသောဝေဒနာတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေဖို့ရာ ဦးတည်အစပြုနေတဲ့ဝေဒနာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့နှလုံးခုန်မြန်ခြင်းကနေဖြစ်လာတဲ့ မူမမှန်နှလုံးခုန်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် နှလုံးရဲ့အပေါ်ဘက်အခန်းတွေမှာသိသိသာသာရိုက်ခတ်နေတတ်ပါတယ်။ မူမမှန်နှလုံးခုန်ခြင်းက အများအားဖြင့်ကျန်းမာနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ အသက်အန္တရာယ်ကိုမခြိမ်းခြောက်နိုင်သေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း သင့်မှာ ဆီးချို၊ သွေးတိုး နဲ့တခြားဝေဒနာတွေရှိမယ်ဆိုရင်တော့ မူမမှန်နှလုံးခုန်ခြင်းက အန္တရာယ်ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေမှာ တော့ ဆရာဝန်နဲ့…
သွေးတိုးသမားတွေ အားဆေးသောက်လို့ရရဲ့လား သွေးတိုးသမားတွေ အားဆေးသောက်လို့ရမရ ဆိုတာကိုမပြောခင်` အရင် ‘သွေးတိုးသမားဆိုတာဘာလဲ’ ‘အားဆေးဆိုတာဘာလဲ’ ရှင်းအောင် အရင်ပြောဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ သွေးတိုးသမားလို့ ပြောရင် နားလည်မှုလွဲနေကြတာတွေ ရှိပါတယ်။ ◾အမြဲတမ်းချိန်လိုက်တိုင်း သွေးပေါင်ချိန် ‘135/85mmHg’အထက်ကိုရောက်နေတဲ့ သွေးကျဆေးအမြဲသောက်ဖို့လိုတဲ့ ‘သွေးတိုးရောဂါ’နဲ့.. ◾ဖိစီးမှုတစ်ခုခုကြောင့် ခဏတဖြုတ်တက်ပြီး ပြန်ကျသွားတတ်တဲ့…
သင့်မှာ သွေးတိုးရောဂါ ရှိနေပြီလား သင့်အနေနဲ့ ဆေးခန်း မှာဖြစ်ဖြစ် အိမ်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် သွေးပေါင်ချိန်ကြည့်တဲ့အခါတိုင်း အပေါ်သွေး ၁၄၀ အောက်သွေး ၉၀ ထက် ကျော်နေပါက သွေးတိုးရောဂါ ရှိနေပြီလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ် ။ ဒါမှမဟုတ် ရက်သတ္တပတ် များစွားကြာအောင်…
အသံတိတ် လူသတ်ရောဂါကို ထောက်လှမ်းခြင်း နောက်ပိုင်း ဆရာတို့ဆေးခန်းတွေမှာ သွေးတိုးမျိုးရိုးရှိသူတွေ အဝလွန်သူတွေ အနေနှင့် ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ သွေးပေါင်ချိန်တွေ ချိန်ကြည့်လိုက်တိုင်း တအားတတ်လာတာကို တွေ့နေကြပါတယ် သွေးတိုးရှိမှန်းမသိ သူတွေ သွေးတိုးကို သေချာ မကုသသူတွေ လည်း ဒု နဲ့ ဒေး…
အတွင်းတိမ်နှင့်ရေတိမ် အတွင်းတိမ် (cataracts) နှင့် ရေတိမ် (glaucoma) နှစ်ခုစလုံးသည် မျက်စိအမြင်အာရုံကို ဆုံးရှုံးစေသည့် အခြေအနေများပင်ဖြစ်သည် ။ အတွင်းတိမ်မှာ မနာမကျင်ဘဲ တဖြည်းဖြည်းနှင့် မျက်စိကွယ်လာစေပြီး ရေတိမ်မှာမူ နာကျင်တတ်ပြီး လျင်လျင်မြန်မြန် ဖြစ်ပွားတတ်သလို ဖြည်းဖြည်းနှင့်လဲ ဖြစ်ပွားနိုင်ပါသည် ။…
ရုတ်တရက်သွေးတိုးစေသောအခြေအနေများ ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ သွေးတိုးရောဂါအဖြစ်များတဲ့လူတွေအကြောင်း၊ ရုတ်တရက်သွေးတိုးရတဲ့အကြောင်းအရင်းတွေကို အဓိကရေးသားဖော်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုလူတွေမှာ သွေးတိုးနိုင်သလဲ? *အသက်အရွယ်ရလာတာနဲ့အမျှ သွေးတိုးဖြစ်နိုင်ခြေများလာပါတယ်။ အသက် ၆၄ မတိုင်ခင်မှာ အမျိုးသားက သွေးတိုးပိုအဖြစ်များပြီး အသက် ၆၅ နှစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ အမျိုးသမီးက ပိုပြီးသွေးတိုးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေပိုများပါတယ်။ *မိသားစုထဲမှာ သွေးတိုးရောဂါရာဇဝင်ရှိရင်လည်း…
သွေးတိုးဟာ မျိုးရိုးလိုက်သလား? မိသားစုဝင်များဟာ မျိုးရိုးဗီဇတွေတူတတ်တဲ့အတွက် သူတို့ရဲ့ အမူအကျင့်တွေတူညီတတ်ပါတယ်။ နေထိုင်မှုပုံစံ၊ စားသောက်မှုပုံစံ နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် စတဲ့ ကျန်းမာရေးအပေါ်ကိုသက်ရောက်နိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေလည်းတူညီတာကြောင့် ရောဂါတစ်ခုခုဖြစ်နိုင်ချေကလည်း တူတတ်ပါတယ်။ သင့်မိသားစုထဲမှာ သွေးတိုးရောဂါရှိတဲ့သူတစ်ဦးပါတယ်ဆိုရင် အထက်ပါအချက်တွေကြောင့်အပြင် သင့်ရဲ့အသက်အရွယ်၊လူမျိူးစတဲ့ အချက်တွေအပေါ်လည်းမူတည်ပြီး သွေးတိုးရောဂါဖြစ်နိုင်ချေရှိပါတယ်။ မျိုးဗီဇနဲ့…
သွေးတိုးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေရှိသူများ သွေးတိုးရောဂါဆိုတာ ခုခေတ်မှာ အဖြစ်များတာနဲ့ အမျှ လူတိုင်းမဖြစ်ချင်ကြတဲ့ရောဂါတစ်မျိုးပါ။ ခုဆောင်းပါးမှာတော့ သွေးတိုးရောဂါဖြစ်နိုင်တဲ့လူတွေအကြောင်းကို ရေးသားချင်ပါတယ်။ ဒီအချက်တွေထဲမှာ စာဖတ်သူသာပါနေခဲ့မယ်ဆိုရင် သွေးတိုးရောဂါဖြစ်နိုင်ချေကို သိရှိပြီးတော့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့ရတဲ့ အချက်တွေကို ပြောင်းလဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သွေးတိုးရောဂါဖြစ်နိုင်တဲ့ အချက်များကတော့ (၁)အသက် အသက်အရွယ်ရလာတာနဲ့အမျှ သွေးတိုးဖြစ်နိုင်ခြေများလာပါတယ်။ အသက်…
* သွေးတိုးမှ ဆေးသောက်လိုက်တယ် ဆရာမ * ပုံမှန် ကြားနေကျ စကားဖြစ်သည်။ ထိုသို့ကြားရတိုင်းလည်း စိုးရိမ်စိတ်က ပေါ်စမြဲ။ သွေးတိုးရောဂါသည် အမြစ်ပြတ် ပျောက်တတ်ပါသလား? မပျောက်တတ်ပါ။ သွေးတိုးရောဂါ၏ ၈၅ရာနှုန်းသည် အသက်ကြီးလာ၍ သွေးကြောများ တောင့်တင်းလာရာမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော ရောဂါဖြစ်သဖြင့်…